I-1L - Idolobhana laseCooperstown, Ifulethi elibanzi
Cooperstown, New York, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Will
Ilungiswe ngokuphelele ikhaya lama-Victorian edolobhaneni laseCooperstown. Ifulethi elizimele elinekamelo lokulala elikhulu, igumbi lokugezela kanye nama-closets. Umlingiswa wekhishi negumbi lokuphumula ngeke adane. Ohambweni olufushane lwemizuzu eyi-10, uzothola izitolo eziningi nezindawo zokudlela ezitholakala yi-Main St., kuyilapho ezinye izindawo zokudlela ezimnandi zingaphesheya komgwaqo. Indawo yokupaka iyatholakala. Uzoba ngamamayela ayi-4 kuphela ukuya ezinkundleni zeDreams Park ngenkathi ifulethi likhona edolobhaneni.
Uzokwazi ukufinyelela ikhishi eligcwele kanye nokusetshenziswa kwawo wonke amalineni ombhede nawokugeza ngesikhathi sokuhlala kwakho. Uma uzithola udinga okuthile okwengeziwe siyakunxusa ukuthi ubuze umphathi wakho.
I-Cooperstown ihlinzeka ngezinhlobonhlobo ezinkulu zokuheha ngaphezu kwe-baseball. Izivakashi zinxuswa ukuthi zizwele ukudla okumnandi, izindawo zewayini nezindawo zotshwala, amamnyuziyamu, nokuzijabulisa kwangaphandle echibini elidumile lase-Otsego.
Umsingathi wakho uzotholakala ukuze kube lula kuwe ukuphendula noma imiphi imibuzo noma okukukhathazayo kukho konke ukuhlala kwakho.
UWill Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R6364.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cooperstown namaphethelo